Times24 Nepal » गिरिजा बाबू जस्तो रास्ट्रबादी नेता नेपालमा छैन। – सुबाश नेवाङ्ग
आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृति दिवस। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा कोइरालाको भूमिका निर्णायक महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छन। कुराकानीका क्रममा अब देशमा के परिवर्तन हुन्छ? एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकता प्रक्रिया के भइरहेको छ ? लगायतका समसामयिक विषय पनि उठान गरिएको छ ।
विगतमा हामीमाथि एउटा आरोप नै थियो, यिनीहरु आन्दोलन गर्न जान्दछन्, तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने ढंग छैन । यथार्थमा विगतमा हामी कतिपय कुरामा असफल पनि भएका थियौँ । तर अहिले सफल भएका छौँ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरेका छौँ । जनताका अधिकार संस्थागत बनाउने आन्दोलन सकियो । अब देशलाई समृद्धितर्फ अभियानमा अगाडि बढेका छौँ ।
मधेशवादी दलले अझै पनि मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?